TAOM-BAOVAO MALAGASY : Nahomby ny hetsika sy ny fanentanana rehetra natao teto Mahajanga
Masoandro niposaka ny voalohan’ny taona malagasy no nisarahan’ireo tonga maro nanatrika izany ny zoma nifoha ny sabotsy 06 aprily lasa teo tao amin’ny tokotany malalaka ny "Mikea" la corniche. 9 avril 2019
Ny zoma tolakandro dia nosokafana tao amin’ny tranoben’ny kolontsaina ny hetsika fankalazana ity taom-baovao malagasy ity, araka ny tetiandro napetraka, izay nanaovana kabary nifandimbiasan’ireo ambaratonga marolafy araka ny arofenitra misy azy avy. Nisongadina tamin’izany ny soatoavina maha malagasy sy ny tokony hanindrahindrana izany isan-taona.
Na tsy nisy mpiahy avy amin’ny minisitera ny kolontsaina sy ny serasera, araka ny fanambaràna aza ity tonon-taona vaovao ity dia hita fa tao anatin’ny firaisankina sy fifankatiavana tanteraka no nentin’ny rehetra tonga maro nanatrika izany. Hanimpitoloha, na ny vary be menaka sy vary notondrahan-dronono sy tantely, narahan’ny dihy sy fianjaikana maha malagasy ny lanonana rehetra mandrapaharaina ny andro ka masoandro niposaka no nisarahana tamin’izany.
Marihina fa ny fikambanan’ireo mpanakanto mivondrona ao amin’ny "Taratr’i Boeny" no mpikarakara, izay notronon’andriamatoa Mbola, talem-paritry ny kolontsaina eto Boeny sy ireo kandida roa lahy solombavambahoaka. Nisaotra ny fahatongavan’ny rehetra sy mirary ny mbola hiaraha- hanamarika io taom-baovao malagasy io ka hanomezan’ny fanjakana laza io tonon-taona io amin’ny taona ho avy iny i Léa Harisoa na i Léa Fashion, izay nitoto nahamasaka ny lanonana tamin’ity taoana ity.